Xiaomi Mi Band Vs Xiaomi Mi Band 2, duel na onye mmeri doro anya | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi Mi Band Vs Xiaomi Mi Band 2, duel na onye mmeri doro anya
Izu gara aga Xiaomi gosipụtara ya Xiaomi My Band 2, ụdị ọhụụ nke mgbaaka ama ama ama ama ama ya na ozi ọma na ọrụ ọhụụ kpalitere mmasị dị ukwuu n'etiti ndị ọrụ. Ọzọkwa isi atụmatụ ya bụ ọnụahịa ya na nke ahụ bụ maka euro 20 anyị nwere ike ịzụta ngwaọrụ a na China. Na Spain ọnụahịa ga-adịtụ elu karịa, mana n'ezie, ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a, obi abụọ adịghị ya na a ga-achị ọchị.
Taa enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-eyi ụdị nke mbido mgbaaka sitere n'aka onye nrụpụta China na nkwojiaka anyị kwa ụbọchị, anyị na-echekwa ma ụdị ọhụụ a ọ bara uru ịzụrụ. Iji kpochapụ obi abụọ ma zaa ajụjụ a n'ụzọ dị mfe, taa anyị chọrọ ịme esemokwu n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ. Ọ bụrụ n ’ị maghị ma ị ga-azụta Mi Mi ọhụrụ ahụ, gaa n’ihu na-agụ ma nwee obi ụtọ na ya Xiaomi Mi Band Vs Xiaomi Mi Band 2, duel na onye mmeri doro anya.
Iji mee ihe atụ a, anyị ga-ekewa ya na akụkụ anọ anyị ga-amalite nyochaa ugbu a, mana kpọsaa onye mmeri nke duel a.
1 Ihuenyo, ile anya na onye mmeri doro anya
2 Akụkụ na ibu ibu
5 Mkpebi kpamkpam
Ihuenyo, ile anya na onye mmeri doro anya
Ihe kachasị mma nke Xiaomi Mi Band 2 bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya, nke na-anọghị na nke mbụ, nke ga-enye anyị ohere ịlele data mmega ahụ anyị oge niile, mana anyị ga-ahụkwa oge na ọkwa ndị na-abịa na ama anyị.
Iji nye nkọwa, anyị ga-echeta na ihuenyo nke jikọtara ngwaọrụ Xiaomi ọhụrụ a bụ OLED na nha nke sentimita 0,42.
Akụkụ na ibu ibu
O doro anya na Esemokwu dị iche iche dị n'etiti Xiaomi Mi Band na Xiaomi Mi Band 2 bi na nzuzo na ọnụnọ ihuenyo na nke abụọ. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ihe ọ nwere ike iyi, ọdịiche dị iche iche anaghị adị ọtụtụ yana usoro izugbe nke ngwaọrụ ahụ ka yiri. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị e ji mee ihe yiri nnọọ ya na plastik na-anọgide na-abụ ihe ka ọtụtụ.
Otu n'ime nnukwu ntụpọ anyị nwere ike ịchọta mgbe anyị nwalere Xiaomi Mi Band bụ mmechi ahụ, nke mepere ọtụtụ oge, yana nke ọ dị nwute na ọ ka dị na ụdị nke abụọ a nke mgbaaka Xiaomi. Obere nsogbu a dị karịa ugbu a mgbe ị na-azụta mgbaaka, nke n'ọtụtụ ọnọdụ, n'agbanyeghị na ọ dị otu a, abụghị ndị isi.
Banyere akụkụ na ibu, ịkwesighi ichegbu onwe gị nke ukwuu n'ihi na ha agbanweela nke ukwuu na ọdịdị nke Xiaomi Mi Band a. Ọ bụkwa na ọ bụrụ na n'ụdị mbụ anyị nwere akụkụ nke 2 x 37 x 13,6 millimita na ibu nke 9,9 grams, na ụdị ọhụrụ a anyị na-ahụ ụfọdụ akụkụ nke 40,3 x 15,7 x 10,5 millimeters na obere ibu dị elu nke na-ebili na gram 7.
Ihe mbụ Xiaomi Mi Band nyere anyị batrị nke ihe dịka 45 mAh, nke nyere anyị ohere iji ya otu ọnwa na-enweghị ịgba ụgwọ ya. Nke a bụ otu n'ime njirimara ndị ọrụ jara gị, nke nwere ike ịnọ ugbu a n'ihe egwu na mbata ihuenyo na Xiaomi Mi Band 2.
Dị ka onye na-emepụta China si gosi, ụdị nke abụọ nke mgbaaka quantifying nwere batrị 70 mAh, nke putara na o kariri nke mbu, mana n’oge a anyi amaghi ndi ochichi nwere ike inye anyi. A na-atụ anya na nnwere onwe nke ngwaọrụ a dịkwa oke elu, ọ bụ ezie na ihuenyo nwere ike ọ gaghị adịkarịa ala otu ọnwa.
N'akụkụ a na ọ bụ ezie na ọ na-efu anyị ọrụ, n'ihi na ihuenyo nwere ike ịbụ ihe mara mma, anyị ga-enye Xiaomi Mi Band dị ka onye mmeri, ebe ọ bụ na ịghara ichegbu onwe gị maka ịkwanye ngwaọrụ ahụ otu ugboro n'ọnwa, bụ ihe dị egwu.
Otu n'ime ebe nlegharị anya nke Xiaomi Mi Band bụ ọnụ ahịa ya ma ọ bụ na maka euro ole na ole anyị nwere ike ịnwe na nkwonkwo aka anyị ngwaọrụ mara mma nke nwere ike ịdekọ ọrụ ahụ anyị niile ma ọ bụ data dị iche na oge ụra anyị. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ Xiaomi emeela ya ọzọ Ma ọ bụ na onye ọrụ ọ bụla nwere ike inweta Xiaomi Mi Band 2 a na euro 20, ọnụ ala karịa ụdị nke mbụ rutere ahịa nwere ọnụahịa mbụ nke euro 30.
Obi abụọ adịghị ya, ọnụahịa ahụ pụtara na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịzụta ngwaọrụ a, ọbụlagodi na ụdị izizi na nkwojiaka ha. Ihuenyo y7a kwesịrị ịbụ ihe zuru oke iji mee ka anyị megharia mgbaaka Xiaomi quantizer anyị. N'ezie, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọnụahịa gọọmentị na China bụ otu ihe na nke ọ ga-eji rute Europe, ebe a ga-ere ya site na ndị ọzọ, bụ ihe ọzọ. Ọ dabara nke ọma na ọbụlagodi nsogbu a, ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 2 a na-atụ anya ka ọ gafere 35 euro ma ọ bụ otu ihe ahụ, ezigbo ahịa.
Ọ dịwo ogologo oge kemgbe m zụtara Xiaomi Mi Band, nke ị nwere ike ịhụ na nkwojiaka m na onyonyo nke gosipụtara na n'elu, ọ bụ ezie na enwetabeghị m ya, emeworị m zụọ, ma ọ bụ maka ugbu a ndoputa, ohuru Xiaomi Mi Band 2. Ma obu Maka obere nkọwa nke usoro Xiaomi nke abụọ dị mma na nke mbụ. Ọnụ ego ahụ nwekwara nnukwu mma ma ọ bụ na imegharịrị ngwaọrụ nke mefuru anyị euro 100 ma ọ bụ 200 bụ «ezigbo ihe mgbu», mana imegharịrị ngwaọrụ anyị zụtara maka euro 20, na-emefu euro 30 ọzọ , ma ọ dịkarịrị obere.
N'oge a, m ka ga-eche ịnata Xiaomi Mi Band 2, mana ahụla ihe m hụrụ, ọ gaghị ewe ọtụtụ ihe iji merie m na enweghị obi abụọ ọ bụla na adịla m anya na ị na-echeba nkọwa niile, nke abụọ ụdị nke Mi Band a bụ onye mmeri doro anya nke iru uju nke biiri anyị taa.
You chere na Xiaomi Mi Band 2 bụ onye mmeri doro anya nke duel na ụdị mbụ nke Mi Band?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Xiaomi Mi Band Vs Xiaomi Mi Band 2, duel na onye mmeri doro anya
"Ndụ Ọjọọ" anyị na-akọwa okwu ahụ nke na-agbanwe netwọkụ